मधेस आंदोलन को उद्देश्य पहाड़मा एमाले को जरो काट्नु हो
मधेस आंदोलन को माग केही पनि छैन। यो ओली हुती नभएको प्रधान मंत्री। माग पुरा गर्ने हुती भएको सँग पो यो माग त्यो माग भन्ने हुन्छ। हुतिहारा प्रधान मंत्री सँग के को माग?
मधेस आंदोलन को उद्देश्य पहाड़मा एमाले को जरो काट्नु हो। चुनाव ताका उपेन्द्र पहाड़ को जिल्ला जिल्ला पुग्छ। Cooking Gas चाहिएको हो कि नचाहिएको हो? नचाहिए एमाले लाई वोट देउ।
यो नाकाबंदी को उद्देश्य एमाले को वोटर बेस लाई तर्साउनु हो। कुरा झिंगा र आँप बाट Cooking Gas मा पुगिसक्यो।
Baburam Bhattarai Constituent assembly constitution federalism KP Oli Madhesh madhesi madhesi kranti3Nepal Terai Upendra Yadav